Mpamatsy mpamafafy zezika sy mpamokatra - mpamokatra famafazana zezika China
Mpanaparitaka zezika amin'ny fambolena
Product Detail Centrifugal disc fertilizer spreader dia mizarazara ho karazana kapila tokana sy kapila roa. Ny fanaparitaka zezika kapila dia misy rakotra, fitaovana fampiatoana, boaty zezika karazana siny, fitaovana fanitsiana fivoahan'ny zezika, lovia manaparitaka zezika ary fitaovana mitondra fiara manaparitaka zezika, araka ny hita eo amin'ny sary 1. Ny boaty zezika dia napetraka eo amin'ny tapany ambony amin'ny milina frame, ary fantsom-panafody napetraka eo ambanin'ny boatin'ny zezika, ary fer ...
Antsipirian'ny vokatra Ny fanaparitaka zezika tsy mandeha amin'ny herinaratra dia fitaovana manaparitaka zezika an-tanety, izay azo sintomin'ny traktera zaridaina misy horsepower 15 na tracteur 18 + HP. Io dia ny famafazana zezika amin'ny faritra kely. Ny mpamafa zezika kely dia afaka manaparitaka zezika simika, sira, vatokely, zavamaniry, ahidratsy ary zezika biolojika, sns. Famaritana ara-teknika Fahaizana mitokona 16in³ / 0.453m³ Fahafahana 28in³ / 0.793m³ Dimy ankapobeny 114 * 46.5 * 30.5in / 2895 * 1181 * 775m ...
Kamiao zezika marobe
Product Detail DFC dia manaparitaka zezika amin'ny zana-kazo manaparitaka zezika alohan'ny fambolena, mamafy aorian'ny fambolena sy ahitra. Notanterahina ny fandefasana zezika zezika voa. Ny masinina dia manana ny mampiavaka ny firafitra mifangaro, ny fampiharana marobe, ny fahombiazany ary na ny famafazana aza, izay tena mety amin'ny fampiasana toeram-piompiana, ahitra ary kijana. Ny orinasanay dia mamolavola sy mamolavola ity karazana zezika ity mba hamaly ny fangatahan'ny mpampiasa ...